Telozoro mahitsizoro piramida boky fanaovana kajy, fanaovana kajy online, fiovam-po
Telozoro mahitsizoro piramida boky fanaovana kajy mamela anao ianao mba hahita ny boky samy hafa karazana piramida, toy ny telozoro, mahitsizoro sy ny hafa karazana piramida, amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Type ny pyramida ho an'ny boky kajy
By base area Fa tsy tapaka maro lafy piramida Fa tsy tapaka telozoro piramida Fa tsy tapaka mahitsizoro piramida Fa ny tetrahedron
Haavo: Base faritra:
Haavo: Base lafiny: Isan'ny tena ratsy lafiny:
Haavo: Base lafiny:
Edge ny tetrahedron;
Piramida dia polyhedron namorona ny mampifandray ny maro lafy fototra sy ny hevitra, antsoina hoe ny fara tampon'ny. Tsirairay tavin-drano sy ny fara tampon'ny sisin'ny endrika ny telozoro, antsoina hoe lateral tarehy. Izany dia conic fototra mafy orina amin'ny maro lafy. —
h - Haavon'ny ny piramida
S - Base Area
Regular piramida dia tsy tapaka izay piramida base dia tapaka marolafy.
a - Base lafiny
n - Isan'ny lafiny tao am-pototry
Regular telozoro piramida dia pyramida zo-zorony telozoro amin'ny faladiany extruding niakatra ho any amin'ny teboka iray monja izany.
Mahitsizoro tapaka piramida dia pyramida amin'ny efamira fototra sy miatrika dia mitovy isosceles triangles.
Tetrahedron dia polyhedron ahitana endrika telozoro efatra, enina mahitsy sisin'ny, ary efatra vertex zoro.
a - Tsisin'ny ny tetrahedron